पत्रु खाना खुवाउँदा सन्तानमाथि धोका | Kendrabindu Nepal Online News
१७ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०७:३४
बालबालिकाले खाना खाँदैन भनेर जङ्क फुड अर्थात् पत्रु खाना खुवाउनु त भएको छैन ? छोराछोरी रोए भने या भनेको मानेनन् भने फकाउनका लागि पत्रु खाना दिने चलन अहिले गाउँदेखि सहरसम्मको समस्या भएको पोषणविद् डा अरुणा उप्रेतीको अनुभव छ ।
चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट दिएर छोराछोरी फकाउने बुवाआमालाई थाहा छ कि छैन , दिइएको खानेकुरा कति अस्वस्थकर र अखाद्य छन् भन्ने । पछिल्लो समय पाकेटको खानेकुरा अत्यधिक रूपमा खाइने र खुवाइने गरिन्छ । पाकेटको खाना स्वस्थकर छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि धेरैले आफ्नो तथा छोराछोरीको स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गरेको डा उप्रेतीको अनुभव छ ।
उहाँका अनुसार चाउचाउमा हुने मैदा मानव स्वास्थ्यका लागि मन्दविष हो, जसले सुस्तसुस्त शरीरलाई कमजोर बनाउँछ । त्यस्तै चाउचाउमा हुने तेल र मसला पनि हानिकारक हुन्छन् । यसमा अजिनामोटो हुन्छ, जसले गर्दा हाडजोर्नी कमजोर हुनुका साथै कहीँकतै हलुकासँग लडे पनि छिट्टै भाँचिने सम्भावना रहन्छ । आयुर्वेदिक चिकित्सक तथा पोषणविद् डा रुवि वज्राचार्यले पनि बालबालिकालाई पत्रु खानाको बानी आमाबुवाले गर्दा नै पर्ने जानकारी दिनुभयो ।
खाना खाएन भने चाउचाउ, लेज खाऊ भनेर माया गर्ने तर त्यही माया पछि उनीहरूको स्वास्थ्यमा कति असर पर्छ भन्ने हेक्कासमेत हुँदैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बालबालिका धेरै रमाएर जन्मदिनमा केक काट्छन् तर त्यही केकले कति रोग निम्त्याउँछ भने थाहा हुँदैन । केकमा गुलियोको मात्रा बढी हुँदा स्वास्थ्यका दृष्टिले खराब हो । ” डा. वज्राचार्य थप्नुहुन्छ, “मानव स्वास्थ्यका लागि चिनी एकदमै ठूलो शत्रु हो, चिनीले स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या पारेको छ । चिनीले मधुमेह जस्ता दीर्घकालीन समस्या ल्याउँछ । पाकेटको खानाले बच्चाको मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकासमा रोक लगाउनका साथै विभिन्न रोग पनि निम्त्याउँछ ।”
बालबालिकालाई पत्रु खानाको बानी हटाउनु छ भने परिवारका सदस्य तथा अभिभावकले नै आफ्नो बानीमा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । डा. उप्रेती भन्नुहुन्छ, “जबसम्म आमाबुवाले पत्रु खाना खान प्रेरित गर्छन्, त्यो बेलासम्म बालबालिकाले कहिल्यै घरको खाना रुचाउँदैन ।” “घरको खाना खाएन भने एक दिन खाँदैन, दुई दिन खाँदैन तर तेस्रो दिन खान्छ”, उहाँले प्रस्ट पार्दै थप्नुभयो, “स्वस्थकर खाना खानमा अभिभावकले नै प्रेरित गर्नुपर्छ ।
पत्रु खाना खुवाउँदा, सन्तानमाथि धोका
Prevकुमारी बैंकका ७ वटा नयाँ शाखाहरू थपिए
आँधीका कारण दक्षिण कोरियामा ६ जनाको मृत्युNext